Njehie nke kaadị Investors. Error 5 - Blockchain News
Itinye aka na oke trading
Odide Etiti trading bụ otu n'ime ndị kasị uru, ma n'otu oge kasị dị ize ndụ azum maka kaadị ahịa. Nke a atụmatụ bụ kwesịrị ekwesị na ahụmahụ egwuregwu bụ ndị dị njikere na-eweta nnukwu ego funahụrụ.
Na oke trading, a cryptotrader ewe a mbinye ego si a ore, onye ihu mgbanwe bụ Ọtụtụ a ego, site n'inye ego nke nnochianya – -njikọ. N'otu oge ahụ, mmasị na ebubo maka iji ego. N'ihi ya, a cryptotrader nwere ike itinye ego na a cryptocurrency ke ngafe nke itule.
E nwere isi ihe abụọ variants nke oke trading: ọ bụ ogologo ọnọdụ, ma ọ bụ a egwuregwu n'ihi na azụ, mgbe ahia-ewepụta eziokwu ahụ bụ na kaadị akpan owo ga-eto eto na price, na a obere ọnọdụ, ma ọ bụ a egwuregwu n'ihi na a ọdịda, mgbe na ọnụego na-aga eziokwu ahụ bụ na price maka cryptocurrency ga ibelata. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na price nke a kaadị akpan owo kpọrọ aga ala mgbe erekwa na ịrị elu, mgbe ahụ, mgbe ọ esịmde a ụfọdụ oké egwu mgbe, na ahia nwere ike ida ya nile nkwụnye ego n'ihi oke oku – amanye mmechi site na ore ahia nke azụmahịa, ma ọ bụrụ na ozu ahia adịghị kwukwara ego na akaụntụ. Ọ bụrụ na ndị biiri ego n'okpuru iyi egwu, mgbanwe nwere ikike iwepu ọnwụ si ego nke ahia nke oke na akaụntụ.
E nwere otu mgbe ahịa, onye nke mbụ nwere nsogbu ndị weere, ikpebi ịkpọlite ​​udu na merie azụ ọkwá ha kama ịnakwere losses. Nke na-akpatakarị ukwuu ọbụna losses.
Njehie nke kaadị Investors. Error 4 Njehie nke kaadị Investors. Error 1
A na-abụghị uru organiz ...
Ford faịlụ cryptocurrency patent
The akpakanamde ibu ...
Previous Post:Njehie nke kaadị Investors. Error 4
Next Post:New eweta na Quebec amalite Bitcoin Ngwuputa arụmọrụ
Ka 21, 2018 na 2:22 AM
Ka 29, 2018 na 2:15 AM
Ka 30, 2018 na 6:11 PM
June 3, 2018 na 2:08 AM
June 4, 2018 na 8:29 PM